Ukuqiniswa Kweenwele I-Nano airy iqonde i-iron idibanisa izinto zokupheka ze-nano-ceramic kunye ne-teknoloji yensimbi emiselweyo, ethi izise iinwele kakuhle kwaye zibambe ngendlela ethe tye ngokukhawuleza. Ndiyabulela kwisenzeli sombane ngaphezulu kwentloko kunye nomzimba, isixhobo sicima ngokuzenzekelayo xa kuvaliwe cap, ekhuselekileyo ukuyijikeleza. Umzimba odibeneyo kunye noyilo olungasebenziyo olungenacingo lwe-USB kulula ukulugcina kwi-handbag kwaye uphethe, unceda abantu basetyhini ukuba bagcine i -irstyle ebukekayo naninina, naphi na. Iskimu semibala emhlophe-nepinki siboleka isixhobo umlinganiswa ongumfazi.
Ibhokisi Yesidlo Sasemini Umzi-mveliso wokutya uyachuma, kwaye ukuthatha ikwayinto eyimfuneko kubantu banamhlanje. Kwangelo xesha, inkunkuma eninzi nayo iye yaveliswa. Iibhokisi ezininzi zokutya ezisetyenziselwa ukugcina ukutya zinokuphinda zisetyenziselwe ukuphinda zisebenze, kodwa iingxowa zeplastiki ezisetyenziselwa ukupakisha iibhokisi zokutya ngokwenene azinakuphinda zisebenze. Ukunciphisa ukusetyenziswa kweengxowa zeplastiki, imisebenzi yebhokisi yokutya kunye neplastiki zidityanisiwe ukuyila iibhokisi zesidlo sasemini ezintsha. Ibhokisi ye-bale ijika inxalenye yayo ibe sisiphatho ekulula ukusithwala, kwaye inokudibanisa iibhokisi zokutya ezininzi, ukunciphisa kakhulu ukusetyenziswa kweengxowa zeplastiki zokupakisha iibhokisi zokutya.
Ukutya Isiphuzo I-Capsule I-Curling Iron Ukuqiniswa Kweenwele Ibhokisi Yesidlo Sasemini